Thwebula Amazon Kindle 1.11.0.40617 – Windows – Vessoft
Thwebula Amazon Kindle
Kindle – isofthiwe yakhelwe sokufunda izincwadi on computer ukuba uthenge at website Amazon. Isofthiwe ine amathuluzi anhlobonhlobo olwenza ukwengeza amabhukhimakhi, ulungise izinga setheksthi, khetha font, ushintsho inani amazwi line njll Kindle iqukethe isichazamazwi Ukugunda ababonisa incazelo nezwi abakhethwa izichazamazwi ahlukahlukene kanye nokwaziswa emithonjeni ngayinye. Esebenzisa akhawunti at the portal Amazon, idatha ngokuzenzekela ehambisanayo phakathi Kindle e-ncwadi kanye software computer.
Ukuvumelanisa emkhatsini amadivaysi
Isichazamazwi esakhelwe ngaphakathi
Ikhono ukubuka futhi uthenge incwadi ethi
Amazwana on Amazon Kindle:
Amazon Kindle Ahlobene software:
Abafundi E-book Isofthiwe ukufunda izincwadi electronic. Isofthiwe ine amathuluzi amaningana for kokulawula eziphambili ezazo izincwadi iqoqo lakho.
English, Українська, Français, Español... Balabolka 2.11.0.600
Abafundi E-book Ithuluzi ukufunda yini imibhalo noma umbhalo files ngokuzwakalayo. Isofthiwe lusiqinisekisa ucule izinga yombhalo by voices ehlukene kanye ngesivinini ehlukahlukene.
English, Українська, Français, Español... FBReader 0.12.10
Abafundi E-book Isofthiwe ukufunda eBooks ku ngetakhiwo letehlukene. The ngokucacile amatafula, izithombe, amagrafu kanye amanothi osekelwa embhalweni.
Abafundi E-book Ithuluzi elula ukufunda izincwadi electronic. Isofthiwe isekela takhiwo ethandwa, usebenza nge ezinqolobaneni futhi kuhlanganisa sici ukulalela izincwadi.
English, Afrikaans, Français, Español... GameMaker 1.4.1657
Avant Browser 2016 build 7 Standard futhi Ultimate
-Internet Isiphequluli fast inhlanganisela yezimpawu elikhulu amathuba. Isofthiwe ikuvumela ukuba ukuvimba izikhangiso, pop-ups and ukususa amafayela esikhashana.
Converters zomsindo Ithuluzi eliphelele ukusebenza nge amafayela alalelwayo amafomethi ezahlukene. Isofthiwe kwenza ukuzehlukanisa, ukuguqula nokuqopha amafayela alalelwayo.
Education Indlela elula ukuthuthukisa inkumbulo futhi zifunde izilimi zakwamanye amazwe. Isofthiwe uhlaziya Mastering ulwazi umsebenzisi futhi inquma inani elihle kunawo yokufunda algorithm.
English, Afrikaans, Українська, Français... Auslogics Registry Cleaner 6.1.1
System nokwenza Umbuso Simple ukuhlanza uhlelo kusukela kumafayela okungadingekile futhi silungise amaphutha ebhukwini. Isofthiwe ikuvumela ukubuka zonke izinkinga ezitholakala enemininingwane umbono iwindi.
Українська, Français, Español, Deutsch... CuteDJ 4.3.4
Umhleli Audio The Dj-studio ukudala izingoma zomculo kanye amamiksi nge amathuluzi anhlobonhlobo. Isofthiwe kuqinisekisa ikhwalithi ye umsindo kabusha ngetakhiwo letehlukene audio.
Abadlali Media Umdlali Elula ukudlala ngetakhiwo athandwayo. Isofthiwe ikuvumela ukuba ukukopisha umculo kumadivayisi ephathekayo ulalele amasevisi lomsakazo.
English, Afrikaans, Українська, Français... .NET Framework 4.6.81 futhi 4